Ibhulogi yabafisa ukupheka kamnandi
Kuthatha isikhathi esingakanani iphawundi ham ukupheka?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukupheka i-ham engenamathambo engu-4lb? Faka i-ham endishini yokubhaka ene-1/2 indebe yamanzi. Mboza nge-aluminium foil. Bhaka ku-325 ° F cishe imizuzu engu-20 kuya kwezingu-30 ngephawundi ngalinye kuze kufudumele. Khonza i-ham manje noma ucwebeze kanje: Susa ucwecwe kuhhamu. Uyipheka kanjani i-4.4 pound…
Izigaba Okunye okuwusizo
Uqinisekisa kanjani ukuthi ubhekeni uyaphekwa?
Ingabe kunendaba uma ubhekeni ungaphekwa kahle? Ubhekeni upheka ukuze uphephe ngokushesha okukhulu. Uma sekungacacile kuphephile ukuthi ungadliwa. Ubhekeni ongahluziwe wona uqobo uyingozi ephansi kakhulu, inqobo nje uma welapheke kahle. Noma ingaphekwanga, mancane amathuba okuthi ulimale. Ingabe ubhekeni wasesitolo usuphekiwe kakade? Ngakho…
Ungakwazi ukupheka ama-boerewors aqandisiwe?
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokupheka ama-boerewors? Sebenzisa isipuni samafutha omnqumo ku-skillet bese uvumela ama-boerewors akho ukuthi apheke emlilweni omncane. Ukushisa okuphansi kuzovumela ama-boerewors ukuthi apheke ngokulinganayo ngenkathi enza nsundu ohlangothini ngalunye. Cishe imizuzu eyi-10 ohlangothini ngalunye kufanele yanele imizuzu engama-20 isiyonke. Wenza njani …
Umbuzo wakho: Iyiphi imifino ephekiwe enempilo noma eluhlaza?
Ingabe kungcono ukudla imifino eluhlaza noma ephekiwe? Ukudla imifino eluhlaza kunikeza umzimba wakho amazinga aphelele e-folate kanye namavithamini ancibilikayo emanzini afana novithamini C. … Nokho imisoco esemifino ephekiwe kulula ukugayeka nokumunca. Imicu ethambile yemifino ephekiwe iholela ekukhishweni kwamavithamini E ...
Ishintsha kanjani imifino uma isiphekiwe?
Ishintsha kanjani imifino uma isiphekiwe? Ukupheka kuyishintsha kanjani imifino? Ukupheka imifino kubhidliza izindonga zamangqamuzana ezitshalo, kukhiphe imisoco eminingi eboshelwe kulezo zindonga zamangqamuzana. Imifino ephekiwe inikeza ama-antioxidants amaningi, okuhlanganisa i-beta-carotene, i-lutein ne-lycopene, kunaleyo eyenza uma iluhlaza. Imifino ephekiwe nayo iletha amaminerali engeziwe. Ingabe imifino ilahlekelwa umsoco wayo ...
Ubuzile: Uyipheka kanjani iSwede eqoshiwe ku-microwave?
I-swede ithatha isikhathi esingakanani ukupheka kuhhavini ye-microwave? Faka i-swede yakho yonke kuhhavini ye-microwave. Setha ukudayela phezulu kanye ne-microwave imizuzu engu-20. Kuthatha isikhathi esingakanani ukupheka i-swede edayiwe? Faka i-swede epanini elikhulu, elinesivalo. Gcwalisa ngamanzi abandayo anele ukuvala izingcezu. …
Ungayipheka isikhathi esingakanani ingulube ku-cooker kancane?
Ungakwazi yini ukupheka ingulube isikhathi eside kakhulu? Ungakwazi yini ukuyipheka kakhulu ingulube? Kunzima ukupheka ngokweqile ihlombe elifakwe kahle futhi elinamafutha. Kodwa-ke, ingaba yi-mushy ngenxa ye-acids ku-sauce uma ukupheka kuqhubeka isikhathi eside kakhulu ngaphezu kwezikhathi zokupheka ezinconyiwe. Qiniseka ukuthi uyibhekile ingulube ...
Ungakwazi ukupheka i-ham yokuvunguza ngama-350?
Upheka isikhathi esingakanani i-spiral ham ku-350? Shisisa ihhavini ukuya ku-350 degrees F. Epanini elincane lokuthosa, beka i-ham side side phansi. Mboza ngokukhululekile nge-foil bese ubhaka imizuzu engu-45. Upheka isikhathi esingakanani i-ham ku-350? Shisisa ihhavini ku-350 degrees F. Khulula ihhashi bese uyihlanza ...
Umbuzo wakho: Ingabe ukubhaka nokupheka kuyefana?
Ikuphi okunye ukufana phakathi kokupheka nokubhaka? Zombili zidinga ikhono nolwazi. Bobabili babiza ukusika, ukusika, ukuxutshwa nokunyakaziswa. Futhi bobabili bangakha izinto ezinhle ezidliwayo. Kepha izinqubo zangempela zokupheka nokubhaka zivame ukwehluka kakhulu, iphuzu elenziwa lacaca kakhulu uma ufunda…
Kungani ungagqoki ubucwebe lapho upheka?
Ungakwazi yini ukupheka ugqoke ubucwebe? NgokoMnyango Wezempilo Nenhlalakahle Yase-Idaho “ubucwebe bungafihla amagciwane abangela izifo ezithwalwa ukudla futhi kwenze kube nzima ukugeza izandla. … Ngenkathi belungisa ukudla, izisebenzi zokudla kufanele zikhiphe amawashi, izindandatho, amasongo, nabo bonke obunye ubucwebe ezingalweni noma ezandleni.” Kungani kungafanele…
ikhasi1 ikhasi2 ... ikhasi888 Olandelayo →
Sawubona! Mina nginguSamantha. I-World of Culinary iyizwe elimangalisayo, elikhulu elihlanganisayo. Kulo mhlaba, sithatha ummese onemicabango ekhanyayo ezandleni zethu ukuze siphekele esibathandayo. Futhi iphunga lezitsha ngazinye kwesinye isikhathi lingasiyisa ezikhathini ezijabulisa kakhulu empilweni yethu. Bonke abathanda nabafuna ukupheka, Siyakwamukela!
© 2022 Umhlaba we-Culinary